De Beers na-ere diamonds diamond dị ka nkume dị egwu
Gemological Institute nke Cambodia
De Beers, diamonds, sịntetik
Òtù Be Beers mara ọkwa ịmepụta ụlọ ọrụ ọhụrụ nke a na - akpọ Boommaahịa nke ga - amalite ịzụ ahịa ọhụrụ nke ọlaọcha diamond nwere ihe eji eme ihe n'okpuru aha igwe ojii na September 2018, na - enye ndị ahịa ihe dị elu, ihe ejiji ejiji na ọnụ ala karịa onyinye onyinye diamond nwere.
Mkpụrụ ego ndị na-emepụta ihe ntanetị ga-ere ahịa site na US $ 200 maka mkpụrụ ego nke anọ-carat na US $ 800 maka nkume otu nkume. Usoro a ga-eweta ihe ohuru ohuru na ohuru nke ndi ozo di iche iche, nke nwere odo odo, acha odo odo na ocha na-acha odo odo na nhoputa nke ugwo ahia na ihe ndi ozo.
"Ogwe ọkụ ọkụ ga-agbanwe ụlọ ọrụ diamond toro mkpuchi site n'inye ndị na-azụ ahịa ngwaahịa na-arụ ọrụ na-egosi na ha chọrọ, ma ha anaghị enweta: ọnụ ahịa ejiji eji eme ihe nwere ike ghara ịdị ruo mgbe ebighi ebi, ma ọ bụ zuru oke maka ugbu a," ka Bruce Cleaver , CEO, De Beers otu. "
Mpị ọkụ ga-amalite na United States ma ga-adị na mbụ maka ndị na-azụ ahịa nke United States site na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na Bochum, yana nkwukọrịta ahịa ka a mara ọkwa na oge.
Onye enyemaka nke De Beers otu, Mpempe akwụkwọ ga-abụ naanị ihe eji emepụta ihe eji emepụta ọla edo si n'aka De Beers, otu onye isi nke isii nke De Beers, onye ndu ụwa nke ihe eji emepụta diamond nwere mmepụta ihe karịa afọ 50. Mpempe akwụkwọ ọ bụla nke mkpụrụaka 0.2 carats ma ọ bụ n'elu ga-eburu logo na-adịgide adịgide n'ime nkume ahụ. A na-ahụ anya na-ahụ anya ma na-akọwapụta ya n'ụzọ dị egwu, logo ahụ ga-akọwapụta nkume ahụ dị ka ihe na-emepụta ihe ma bụrụ ihe na-egosi ịdị mma na mmesi obi ike na Element isii mepụtara ya.
Iji kwado Bochum, ìgwè De Beers na-etinye ngụkọta nke US $ 94 nde afọ anọ n'ime ụlọ ọrụ mmepụta Element isii nke dị nso Portland, Oregon, USA na-agbakwụnye na ụlọ ọrụ Element Six nke dị na UK. Ozugbo arụ ọrụ zuru oke, osisi ahụ ga-enwe ike ibuli 500,000 akpụkpọ ụkwụ diamond na-emepụta kwa afọ.
Maka ozi ọzọ, gaa na www.lightboxjewelry.com.
Okpuchi Kilauea nke United States emeghi ka mmiri ozuzo si na mbara igwe zoo
Ajụjụ TV site na French TV
nnukwu mkpokọta nkume
Iko jupụtara ruby
Koi azu quartz
Mkpụrụ osisi hematite na-acha edo edo mara mma
Pink na-eso ụzọ Mookaite
Lily pad jaspa